Izinto ezi-3 zokuqwalaselwa ngotshintsho kuGoogle kwiNtengiso | Martech Zone
Google iintengiso zombhalo ezandisiweyo (Ii-ETA) zihlala ngokusemthethweni! Ifomathi entsha, ende eyintengiso yokuqala ehambayo ikhutshwa kuzo zonke izixhobo ecaleni kwefomathi yentengiso esemgangathweni efanelekileyo yedesktop- kodwa kuphela okwangoku. Ukuqala nge-26 ka-Okthobha ka-2016, abathengisi abasayi kuphinda bakwazi ukwenza okanye ukulayisha iintengiso ezibhaliweyo eziqhelekileyo. Ekugqibeleni, ezi ntengiso ziya kuphelela kwimbali yokukhangela ehlawulelweyo kwaye inyamalale kwiphepha lakho leziphumo.
UGoogle unike abathengisi esona sipho sabo sikhulu ukuza kuthi ga ngoku: Iipesenti ezingama-50 zesithuba sentengiso kunye nabalinganiswa abongezelelweyo ukuchaza iimveliso kunye neenkonzo zabo. Kodwa ukuba ulichitha eli thuba, liyakukubiza kakhulu njengoko okhuphisana nabo besebenzisa ixesha ukubhala iintengiso kwifomathi entsha, ukuvavanya, nokwandisa iindlela zabo ze-SEM. Ngomhla obekiweyo kaGoogle osondela ngokukhawuleza, abathengisi kufuneka baye emsebenzini bebhala uyilo lwentengiso esele ikho ngokukhawuleza ukuze bahlale bekhuphisana kwindawo yokukhangela yentengiso.
Sijonge kakhulu kwii-ETA okoko uGoogle waqalisa ngokuseta i-beta ngoMeyi. Ngaphezulu kwesinye kwisithathu sabathengi beenkampani zam sele bevavanya ii-ETA kwiipesenti ezingama-50 zeeakhawunti zabo. Nazi izinto ezintathu esizifundileyo eziza kuba luncedo kuwe xa usakha isicwangciso sakho.
1. Phinda ucingisise konke ukuyila kwakho
Ukudibanisa kunye neenkcazo zakho ezikhoyo kunye nokuphosa ngokungathandabuzekiyo Ukuhanjiselwa ngenqanawe mahala kwintloko yakho yesibini kulinga, ukuba kuphela ukugcwalisa indawo entsha ngabalinganiswa abathile, kodwa ayisiyo mpendulo. Sikubonile ngokwenene ukuba abathengisi benza le nto kwaye sabukela njengoko amaxabiso onqakrazo-ehla ngokusebenzisa i indawo yokugcwalisa qhinga. Ukongeza ikopi esiphelweni somxholo ngaphandle kokuthatha wonke umyalezo kunye nophawu lokuthathela ingqalelo akuqinisekisi ukuba intengiso iya kuba nengqondo okanye ukuqhuba konqakrazo.
Ndizakubuyela kuMlawuli weNtengiso yeNtsebenzo kuGoogle Matt Lawson othe:
Sebenzisa olu hlaziyo njengethuba lokuphinda uvavanye uyilo lwakho lonke. Eli lithuba lokuyila into entsha kwaye inyanzelekile kunanini na ngaphambili.
Cinga ithuba kunokuba ube nengxaki.
2. Musa ukulahla iintengiso zakho ezindala kwangoko
Njengayo yonke into ekukhangelo oluhlawulelweyo, ngenxa yokuba iintengiso zombhalo ezandisiweyo zintsha akuthethi ukuba ziya kuphumelela kwiintengiso zakho ezindala zisuka nje kwilulwane. Sebenzisa ii-ETA zakho ezintsha ecaleni kweentengiso ezindala. Ukuba iintengiso zakho ezisemgangathweni zisebenza ngokugqithileyo kwii-ETA, jonga ukuba zeziphi iindlela zokuthumela imiyalezo ezisebenzayo kwaye ulungelelanise ezo zikwifomathi ye-ETA.
3. Qalisa ukucinga ngeeholide
Ixesha leholide ngumqhubi omkhulu wengeniso kwintengiso yokukhangela. Kuyamangalisa kwaye kudla ixesha kumaqela angaphakathi ukulawula ukunyuselwa kunye nokubhala ikopi yentengiso yeholide kwisikali. Ukuba ufuna ukusebenzisa uninzi lweedola ngeli xesha leholide, kungcono ukuba isicwangciso sakho se-ETA sisebenze kude kube ngumhla wokugqibela kaGoogle. Lungisa iqela lakho langaphakathi ngoku.
Zama ngobude bomlinganiswa
Uvavanyo lwethu lokuqala lwe-beta lubonisa ukuba ii-ETAs ezinde zinamaxabiso aphezulu okucofa (CTR) ngokomndilili, kodwa imeko inokwahluka ngeakhawunti. Nantsi into esiyifundileyo ukuvavanya ubude bentloko kwii-akhawunti zabaxhasi be-beta.
[ibhokisi yohlobo = "ulwazi" lungelelanisa = "ulungelelwaniso" iklasi = "" ububanzi = "90%"]
Ubude boBuntu kwiiNtloko CTR *
* Ngokuchasene nomndilili we-ETA wokucofa kwinqanaba lokukhuthaza iiakhawunti zabaxhasi beBeta
UGoogle uneentengiso ezingaphezu kwe-9 yezigidigidi. Ngokuqinisekileyo, ezinye zenziwe ziitemplate ukuze inani leentengiso ezizodwa lincinci, kodwa sisathetha ngokubhala ngokutsha iibhiliyoni zeentengiso nokuba uzisike njani. UGoogle akazange anike esidlangalaleni uncedo kubathengisi ukujongana nale ngxaki. Inani elibalulekileyo lokuphinda ubhale liyimfuneko akukhathaleki ukuba zingaphi iintengiso ezikwi-Intanethi ezisebenzisayo kwimikhankaso yazo. Ukuba awukaqalisi ukulungiselela, akukho xesha linje ngoku. Ukulinda kude kube ngomso kunokuba kube semva kwexesha kakhulu.
tags: isicatshulwa sentengisoinkxasoyokukhuthaza imithombo yeendabactretaumyalezo wentengiso owandisiweyogoogle adwordsisihloko sokugcwalisa indawoHlawula ngokucofa kanyePPCIarhente ye-ppcpc ctrindawo yokugcwalisaisicwangciso sokugcwalisa indawoUmbhalo wentengiso
Sep 14, 2016 ngo-12: 00 PM
Iposi elungileyo! Utsho ukuba> Iintloko zentloko ezingama-135 ziqhuba ngcono. Kodwa ukuba umda ngu-30 - 30, ufika njani kwi-135?